အချိုးအစားပြေပြစ်စွာနဲ့ လှပနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့ဗီဒီယိုလေး…. – Real Link
အချိုးအစားပြေပြစ်စွာနဲ့ လှပနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့ဗီဒီယိုလေး….
သူမ ကို ချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ် တွေ က မမြတ်လေး လို့ ချစ်စနိုး ခေါ် ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချော အေးမြတ်သူ က တော့ ချစ်စရာကောင်း ပြီး ပွင့်လင်း တဲ့ ဟန်ပန် အပြော လေး တွေ နဲ့ ဟန်ဆောင် မှု ကင်းစင် တဲ့ နေပုံလေး တွေ ကြောင့် ပရိတ်သတ် တွေ ရဲ့ အားပေးဝန်းရံ မှု ကို ရှိထားသူ လေး ပါ..။
ထို့ပြင့် သူမ ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိ တဲ့ အလှ တွေ နဲ့ ချစ်စဖွယ် မျက်နှာ ပေါ် က ပါးချိုင့် လေး ဟာ လည်း ပရိတ်သတ် ကို အချစ် ပို စေ နေတာလည်း ဖြစ် ပါ တယ်..။
မမြတ်လေး က တော့ ယခုချိန် ထိ လည်း အရွယ်တင် နုပျို နေဆဲ ဖြစ် ပြီး သူမ ရဲ့ အလှ တွေ ကလည်း ဆယ်ကျော် သက် တွေ အပြိုင် လှပနေတာ ပါ..။ အေးမြတ်သူ က အသက်(၃၀)ကျော် လို့ ထင်ရက် စရာ မရှိအောင် ကို ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်း ရော၊ အသား အရည် တွေ ပါ လှပ နေသူ တစ်ယောက် လည်းဖြစ် ပါ တယ်..။
ခန္ဓကိုယ် အချိုးအစား ကို ဂရုစိုက် တတ်တဲ့ အေးမြတ်သူ က လေ့ကျင့်ခန်း တွေကို ပုံမှန်လေး လုပ်နေတာ ဖြစ် ပြီးတော့ ပရိတ်သတ် တွေကို လည်း သူမ ရဲ့ ဗွီဒီယိုလေး တွေ ကို အမြဲတမ်း ချပြပေး လေ့ရှိပါ တယ်..။
ယခုလည်း ပဲ သူမ ရဲ့ လူမှု ကွန်ယက် မှာ ခန္ဓာကိုယ် အလှ တွေ လျော့မ သွားစေ အောင် အသေ အချာ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ် နေ တဲ့ ဗွီဒီယိုလေးတစ်ခု ကို တင် ပေးလာ ပါတယ်..။ ပရိတ်သတ် ကြီး အတွက် အေးမြတ်သူ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံစံနဲ့ အထာ ကျကျ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ် နေတဲ့ ဗွီဒီယို လေး ကို ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါ တယ် နော်…။
သူမ ကို ခ်စ္တဲ့ ပရိတ္သတ္ ေတြ က မျမတ္ေလး လို႔ ခ်စ္စနိုး ေခၚ ၾကတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေခ်ာ ေအးျမတ္သူ က ေတာ့ ခ်စ္စရာေကာင္း ၿပီး ပြင့္လင္း တဲ့ ဟန္ပန္ အေျပာ ေလး ေတြ နဲ႔ ဟန္ေဆာင္ မႈ ကင္းစင္ တဲ့ ေနပုံေလး ေတြ ေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ ေတြ ရဲ့ အားေပးဝန္းရံ မႈ ကို ရွိထားသူ ေလး ပါ..။
ထို႔ျပင့္ သူမ ရဲ့ ဆြဲေဆာင္မႈရွိ တဲ့ အလွ ေတြ နဲ႔ ခ်စ္စဖြယ္ မ်က္ႏွာ ေပၚ က ပါးခ်ိဳင့္ ေလး ဟာ လည္း ပရိတ္သတ္ ကို အခ်စ္ ပို ေစ ေနတာလည္း ျဖစ္ ပါ တယ္..။
မျမတ္ေလး က ေတာ့ ယခုခ်ိန္ ထိ လည္း အရြယ္တင္ ႏုပ်ိဳ ေနဆဲ ျဖစ္ ၿပီး သူမ ရဲ့ အလွ ေတြ ကလည္း ဆယ္ေက်ာ္ သက္ ေတြ အၿပိဳင္ လွပေနတာ ပါ..။ ေအးျမတ္သူ က အသက္(၃၀)ေက်ာ္ လို႔ ထင္ရက္ စရာ မရွိေအာင္ ကို ခႏၶာကိုယ္ပိုင္း ေရာ၊ အသား အရည္ ေတြ ပါ လွပ ေနသူ တစ္ေယာက္ လည္းျဖစ္ ပါ တယ္..။
ခႏၶကိုယ္ အခ်ိဳးအစား ကို ဂ႐ုစိုက္ တတ္တဲ့ ေအးျမတ္သူ က ေလ့က်င့္ခန္း ေတြကို ပုံမွန္ေလး လုပ္ေနတာ ျဖစ္ ၿပီးေတာ့ ပရိတ္သတ္ ေတြကို လည္း သူမ ရဲ့ ဗြီဒီယိုေလး ေတြ ကို အျမဲတမ္း ခ်ျပေပး ေလ့ရွိပါ တယ္..။
ယခုလည္း ပဲ သူမ ရဲ့ လူမႈ ကြန္ယက္ မွာ ခႏၶာကိုယ္ အလွ ေတြ ေလ်ာ့မ သြားေစ ေအာင္ အေသ အခ်ာ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ ေန တဲ့ ဗြီဒီယိုေလးတစ္ခု ကို တင္ ေပးလာ ပါတယ္..။ ပရိတ္သတ္ ႀကီး အတြက္ ေအးျမတ္သူ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံစံနဲ႔ အထာ က်က် ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ ေနတဲ့ ဗြီဒီယို ေလး ကို ျပန္လည္ ေဖာ္ၿပ ေပးလိုက္ပါ တယ္ ေနာ္…။
Previous post တင်းကိတ်လှတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို တုန်ခါနေအောင် လှုပ်ခါပြလိုက်တဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့် ရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယိုလေး
Next post အမျိုးသားထုကြီး အသက်ရှုမှားလောက်အောင် ရင်ခုန်ဖွယ်ရာ ကကွက်လေးနဲ့ အပီအပြင်ကြဲနေတဲ့ သန္တာဗိုလ်ရဲ့TIK TOKဗီဒီယို..